NS Media | गुर्जे चौकीमा प्रहरीले ६ घण्टा रोकेपछि
गुर्जे चौकीमा प्रहरीले ६ घण्टा रोकेपछि
लकडाउनदेखि म अधिकांश नुवाकोटको घरमा बस्दै आएको छु । अस्ति ११ गते औषधी किन्न काठमाडौं गएर हिजो भाद्र १२ गते गाऊँ फर्कने क्रममा दिउँसो १ बजे गुर्जे चौकी आईपुगेको थिए । शिवपुरी सिल भएकोले जान नमिल्ने कुरा चौकी ईन्चार्जले बताउनु भयो । प्रेस्कृपसन र औषधी देखाउदै म शिवपुरी ८ को नागरिक बताउँदा पनि गाउँ प्रवेश गर्न दिईएन । प्रहरीले जिल्लाको आदेश भए मात्र छोडन सकिने वताईयो । म जस्तै औषधि लिएर आएका र जरुरी काम परेका छ वटा मोटरसाईकल थिए ।
मैले सांसद हित वहादुर तमाङलाई आफ्नो र त्यहाँ भएकाको समस्या सुनाए । उहाँले प्रजिअलाई फोन गर्नु भयो । त्यो नाकावाट सव वाहन र एम्वुलेन्स वाहेक अन्य साधन नछोडने निर्णय भएकोले प्रवेश दिन नसकिने बताउनु भएको कुरा मलाई खवर गर्नु भयो र काठमाण्डौ फर्कन सल्लाहा दिनु भयो ।
प्रजिअले तपाईलाई राम्रैसंग चिन्छन भनेपछि उहाँसँग नम्वर मागेर मैले फोन गरे । प्रजिअ लेसरलाई २०४५ साल देखी चिन्छु भन्नुभयो । म उहाँलाई नामले चिन्दिन देख्दा चिन्छु चिन्दिन थाहा छैन । मैले सव वाहन र एम्वुलेन्स बाहेक अन्य सवै साधन प्रवेश निषेध गरेको छु आफ्नै आदेश विपरित अर्को आदेश गर्न असमर्थ छु सरि भन्नु भयो । मैले घर जाने आशा मारे । साच्चै एम्वुलेन्स र शव वाहन बाहेकका गाडी मोटरसाईकल प्रवेश गर्छन कि गर्दैनन केही वेर बसेर फर्क्न्छु भन्ने सोचे र बसे । पटक पटक गरी ४ जना सेनाका वाईक पास भए । ३ वटा सार्वजनिक मोटरसाईकल प्रवेश गरे । त्यसपछि लिखु गाउँपालिकका अध्यक्षको गाडी काठमाण्डौ र उपाध्यक्षको गाडी नुवाकोटका लागि आईपुगे । लिखु अध्यक्ष धुर्व श्रेष्ठले दाईलाई छोडिदिन भने र गए । शिवपुरी ४ का वडा अध्यक्ष पनि चौकीमा चिनजान हुनेका नाताले मलाई जान दिन सिफारिस गर्दै वाईकमा काठमाण्डौ प्रवेश गरे । त्यसपछि ७२ वर्षका किड्नीका बिरामी डाईलसिस गराएर टाटा सुमोमा आएर घरजाने अनुमति मागे । उनलाई गल्छीबाट जान भनियो । तत पस्चात वागमती प्रदेशका सांसद केशव पाण्डेको गाडी आईपुग्यो । ड्राईभरले मलाई बोलायो । पाण्डेजिले कता जानलाग्नु भयो किन बस्नु भयो सोधे । गाउँ जाने अनुमति पर्खेर बसेको भनेपछि उहाँलाई छोडि दिनुस म प्रजिअसँग कुरा गरौला भने र गए । फेरि केही चौकीका सिपाहीका चिनजानका वाईक पास भए । मैले सोचे र त्यहाँ भएका भाईहरुसँग भने प्रजिअ सासद गृहमन्त्री चिन्नुभन्दा यहाँको एउटा सिपाही चिनेको भए काम लाग्ने रहे छ । त्यही बीचमा चौकीको केही तल दाना बोकेको गाडी विना ईन्ट्री प्रवेश गराईयो । जागरुक कृषि सहकारीको तरकारीको गाढी फर्काईयो । बिहान दुधको गाढी प्रवेश दिईयको रहेछ ।
मैले आफुलाई प्रवेश नदिएकोमा भन्दा किमो दिएर आयको गाढीलाई प्रवेश नदिएकोमा पिडा भयो । जनप्रतिनिधिहरुले तिनको ख्याल पनि गरेनन् । साँझ पर्दै थियो । एउटा वाईकलाई जाने अनुमति आयो जानुस भनेपछी मैले रोके र सोधे अनुमति कस्को । अघि पठाउनु भएका सेता प्लेटका गाढी र मोटर साईकल सव वाहान हुन कि एम्वुलेन्स ? दाना वोक्ने गाडी किन छोड्नुभयो ति कस्का अनुमतिमा छोढनुभयो ? टाटा सुमोको यो विरामी किन रोक्नु भयो ? प्रश्न को उत्तर थिएन र जवाफ पनि आएन । त्यतिबेला मात्र मैले आफ्नो परिचय दिए । तपाईको गुनासो माथि गर्नुस मात्र जवाफ आयो । त्यसपछि विरामीको सुमो छोडियो । मलाइ धन्यवाद दिदै उनिहरु गए । मैले प्रजिअलाई दुई कल गरे फोन उठेन । अनि म्यासेज गरे । सर पुलिसका चिनजानका वाईक आते जाते छन । सरकारी प्लेटका गाडी दशैमा बसले प्यासेन्जर वोके झै मान्छो कोचेर आए गए । दानाका गाडी प्रवेश भए तरकारीका फर्काईए । शव वाहन र एमवुलेन्स वाहेक निषेध भन्नु हुन्थ्यो । तपाईको अनुमती हो भने हामीलाई किन अनुमति दिनुभएन ? चौकीको मनोमानी हो भने तपाई चौकी ईन्चार्जलाई के कारवाही गर्नु हुन्छ ? कृपया जवाफको अपेक्षा भनेर पठाएपछि प्रजिअको फोन आयो वडा अध्यक्षको र चौकीको समन्वयमा छोड्न भनेको छु भने र १०÷१२ वटा वाईक लाई गन्तव्यमा जान दिईयो । मैले आफु नेता भएकाले छोड्न पर्ने धम्की दिएको र आफ्नालाई मात्र प्रवेशको माग गरेको र केशव पाण्डे÷धुर्व श्रेष्ठहरुलाई अनुनय गरेको भन्ने कपोकल्पित समाचार असत्य हो । उनिहरुले मेरो आग्रह विपरित छोडिदिन भनेको चै सत्य हो । यथार्थता यही हो । केही अनलाईनले नेकपाको नेताको सान लगाएको वडा अध्यक्षको जिम्मा छोडिएको काल्पनिक र प्रायोजित समाचार प्रकाशित गरेछन र चौकी ईन्चार्जलाई ईमान्दार र वफादार भन्दै मेरो चरित्र हत्या गर्ने दुस्प्रयास गरेछन । चौकी ईन्जार्जले खिचेको फोटो प्रकाशित गरेछन् ।
म त्यो झुट समाचारको खण्डन गर्दछु ।
कोरोना कहिले समाप्त हुने थाहा छैन ? लकडाउन गरेर कमिसन र घुसखोरीमा रमाउनेहरुले लकडाउनका अवधिमा देशव्यापी जुलुस गर्न लगाएर समुदायमा कोराना फैलाएका हुन । कति महिना कति वर्ष लकडाउन र निषेधाज्ञा गरी जनतालाई घरमा थुनेर राख्ने ? अत्याअवसेक काममा आते जाते रोक्ने दुध, चल्ला, दाना, तरकारी बोक्ने सवारी रोक्ने निर्णय जनविरोधि छ । म यस्ता जनविरोधि निर्णयको निन्दा गर्दछु । जन प्रतिनीधि र राजनितिक पार्टीहरुको तत्काल ध्यानाकर्षण गराउँछु । लकडाउन निषेधाज्ञा वा सिलका नाममा अत्यावसेक आगागमन र अत्यावसेक वस्तुको ओसार पसारमा प्रतिबन्ध निन्दनिय छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले अविलम्व निर्णय सच्याउन आवस्यक छ । जिल्ला प्रतिबन्ध लगाउने चौकीहरु रातमा लेना देनागरी गाढी पास गर्ने र अत्यावसेक वस्तु ओसारपसार गर्नु पर्ने जनताको वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य होस ।